Sawirada Taariikhda Jirka si Fudud | Martech Zone
Isniin, Disembar 18, 2006 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Muuqaal fiican oo aad ka heli karto boggag badan ayaa ah halka aagga ay ka kooban tahay bartamaha ay u muuqato inay ku daboolayso bogga hoos hoos hoos u dhacaya. Xaqiiqdii waa hab fudud oo fudud oo looga dhigayo balooggaagu inuu u muuqdo mid fiican (ama degel kale) oo leh sawir asal ah.
Jaantus inta ay le'egtahay waxyaabahaagu. Tusaale: 750px.
Ku samee sawir dalabkaaga sawirka (Waxaan u adeegsadaa sawir-qaade) ka ballaadhan aagga ay ka kooban tahay. Tusaale: 800px.
U deji asalka sawirka asalka aad rabto inaad ku yeelatid dhinac kasta oo ka mid ah baloogga.
Kudar gobol cadaan xaga dambe.
Meel hadh ah ku mari gobolka cad ee ka soo baxa labada dhinac ee gobolka.
Deji aagga dalagga ballaciisu yahay 1 pixel dherer ahaan. Tani waxay ka dhigi doontaa sawirka inuu soo dejiyo mid fiican oo isku dhafan oo si dhakhso leh loo bixiyo.
Soo saar sawirka.
Waa tan sida aan ugu dhisay anigoo adeegsanaya Sawirka (ogsoonow inaan leeyahay aagga dalagga aad uga dheer… taasi waa si aad u aragto waxa aan sameynayo):
Waa kuwan tusaale sida wax soo saarku ugu ekaan doono sawirka asalka:
Waa tan sida loo adeegsado sawirka adoo isticmaalaya sumadda qaabka jirkaaga CSS gudbiso.
asalka: # B2B2B2 url ('sawirada / bg.gif') xarunta ku celcelinta;
Waa tan qaybinta astaamaha qaabka asalka:
# B2B2B2 - wuxuu dejiyaa midabka guud ee bogga. Tusaalahan, waa cawl u dhigma cawlka sawirka asalka ah.
url ('images / bg.gif') - wuxuu dejiyaa sawirka asalka ah ee aad jeclaan lahayd inaad isticmaasho.
ku celcelin-y - waxay dejineysaa sawirka si ay ugu celiso dhidibka-y. Marka sawirka asalka ah wuxuu ku celin doonaa kor ilaa hoose ee bogga.
dhexda - waxay dejisaa sawirka bartamaha bogga.
Fiican oo fudud easy hal sawir, hal qaab sumad!
Tags: backgroundsawirada asalka
18, 2006 at 11: 55 PM
Qoraalkan ayaa la qoday!
Feb 16, 2009 markay ahayd 4:42 PM
Mahadsanid. Si fiican buu iigu shaqeeyey!